Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247599 times)
« Reply #220 on: June 08, 2011, 01:39:50 PM »
:" ပြန် လည် တွေ့ဆုံ တော့ ကွယ် "
အလှူအိမ်တစ်ခုတွင် ဆယ်နှစ်ကျော် ကွဲကွာနေသော အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့ပြန်လည်တွေ့ ဆုံကြသည် ။
အမျိုးသမီးက ပြောသည် ။
" ကိုထိန်ဝင်း..ရှင် ကျမကို မမှတ်မိဘူးလား...။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က ရှင့်ကို လက်ထပ်ဖို့ 
ရှင် ကျမကို ပြောခဲ့တယ်လေ..."
" ဟုတ်လား...အဲ့ဒီတုန်းက ခင်ဗျား ဘာအဖြေ ပေးလိုက်သလဲဟင်.."
" မင်း အ တွက် ဆို ရင် "
" မောင်...မတော်တဆ ကျမ မြစ်ထဲ ခြေချော်ကျသွားမယ်ဆိုရင် မောင် ဘာလုပ်မလဲဟင်.."
" အနားက ရွာကို ပြေးပြီး အကူအညီတောင်းမှာပေါ့.."
" ရွာက အဝေးကြီးပဲ.."
" ကိုယ်အင်မတန်ချစ်ရတဲ့ မင်းလို မိန်းမအတွက်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်စွန်းကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မောင်
« Reply #221 on: June 08, 2011, 01:54:20 PM »
" မ နာ လို ဘူး "
" ငါ့ မိန်းမဟာ တကယ့် နတ်သမီးပဲကွ.."
" မင်းကတော့ ပြောအားရှိပြီပေ့ါ....ငါမိန်းမကတော့ အခုထိ အသက်ရှင်တုန်း..."
" မ တွေး နဲ့"
" ကြက်ဖဟာ ကြက်မကို လိုက်လို့ မိတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကို နှုတ်သီးနဲ့ဆိတ်ရတာလဲ.."
" တစ်ခြားကြက်ဖတွေအကြောင်း မစဉ်းစားနိုင်အောင်လို့"
" မ မှတ် မိ ဘူး "
တရားရုံးတွင် ဖြစ်သည် ။ တရားသူကြီးက တရားခံ ကိုချူချာကို မေးသည် ။
" မနေ့ က ခင်ဗျား ပုလင်းနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်လိုက်တဲ့လူ ဟိုရှေ့ မှာ ထိုင်နေတယ်..
" ဟင့်အင်း...မနေ့ က ကျနော် ရိုက်လိုက်တဲ့ လူရဲ့ခေါင်းမှာ ပတ်တီး စီးမထားဘူး..."
« Reply #222 on: June 08, 2011, 02:04:36 PM »
" သိ တယ် ဆို တာ ကို "
" စောရမင်းသား " ကိုချူချာ၏ အိမ်သို့ရဲသားများ လာပြီး တံခါးခေါက်သည် ။
" ဟေ့ ချူချာ..တံခါးဖွင့်စမ်း..ငါတို့ ရဲတွေကွ..၊ မင်း စိန်ရွှေ ရတနာတွေ ခိုးသွားတယ်ဆိုတာ
ငါတို့သိတယ်..၊ မင်း ၀ှက်ထားတဲ့ နေရာကိုလည်း သိတယ်.."
" ခဏနေဦးနော်..ကျနော် နေရာပြောင်း ၀ှက်လိုက်ဦးမယ်..."
" စိုး ရိမ် မိ သည် "
နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းတွင် နာကျင်သော ဝေဒနာဖြင့် ကိုချူချာ ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသည် ။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ဆရာဝန်က ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား ဖြစ်တာ ဆစ်ဖလစ် ဗျ "
" ဟုတ်လား ..၀မ်းသာလိုက်တာ ဆရာရယ်...၊ ကျနော်က တုတ်ကွေး ဖြစ်ရင် ဒုက္ခ ပဲလို့စိုးရိမ်နေတာခင်ဗျ.."
« Reply #223 on: June 08, 2011, 02:18:12 PM »
" ပူ ဂင် "
ဆေးခန်းတွင် ခဏထိုင်ပေးရန် ဆရာဝန်က ကိုချူချာကို မေတ္တာ၇ပ်ခံသည် ။ ဆေးများကို ပြသည် ။
ဒါက ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး..၊ ဒါက ကိုယ်ပူကျဆေး...၊ ဒါက ပူဂင် (၀မ်းနှုတ်ဆေး) ။
မိနစ် ၂၀ အကြာတွင် ဆရာဝန် ပြန်ရောက်လာသည် ။
" ဘယ့်နှယ့်လဲ အကုန်လုံး အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား.."
" မပြောတတ်ဘူး..ဆရာထွက်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကျနော် အကုန်မေ့ သွားတယ်..ပူဂင် ဆို
" လူနာတွေ လာသေးလား.."
" လာတယ်...နှစ်ယောက်..၊ တစ်ယောက်က ခေါင်းကိုက်တယ်လို့လာငြီးတယ်..၊ ခေါင်းကိုက်ပျောက်
ဆေး ဘာလဲဆိုတာ ကျနော် မေ့နေပြီ..၊ ဒါနဲ့ပူဂင် ကို ပေးလိုက်တယ်.."
" အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ.."
" သူ..အကြာကြီး စကားတွေဆက်ပြောတယ်...နောက် ဗြုန်း ဆို နေရာက ခြေကုန်သုတ် ပြေးတော့တာပဲ "
" နောက်တစ်ယောက်က ကော.."
" အဲ့ဒီလူကတော့ တစ်ချိန်လုံး နှာချေနေတယ်. ၊ ကျနော် ပူဂင် ပဲ ပေးလိုက်တယ်.."
" သူကော ဘာဖြစ်လဲ.."
" ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်....ဟိုး ကော်ရစ်ဒါဒေါင့်မှာ မျက်နှာ ဖြူပတ်ဖြူရော်နဲ့ရပ်နေတယ်
တွေ့ လား....အခုထိ နှာချေရမှာကို သူ ကြောက်နေတယ်...."
« Reply #224 on: June 08, 2011, 02:56:49 PM »
" ညီ မ လေး တဲ့ လား "
ဆေးရုံတက်နေသော ချစ်သူထံ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး လူနာကြည့်ရန် ရောက်လာသည် ။
၀တ်ရုံအဖြူ ၀တ်ထားသော မိန်းမကြီးတစ်ဦးကို တွေ့ သည်နှင့် မိန်းခလေးငယ်က မေးသည်။
" အခန်းနံပတ် ၅ က လူနာကို ကြည့်ခွင့်ရှိပါသလားရှင်.."
" ငါ့တူမက လူနာနဲ့ ဘာတော်သလဲကွယ့် "
" ကျမက သူ့ညီမပါ "
" သြော်..ညီမတဲ့လား...တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ကွယ်...အန်တီက ..သူ့ အမေပါ.."
" ပြော တာ ချင်း အ တူ တူ "
အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်နေကြသည် ။
" ငါက ညည်းလို တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း သူများ အတင်းတွေ လျှောက်ပြောနေတဲ့
မိန်းမ မဟုတ်ဘူး ဟေ့..."
" ကြည့်စမ်း...ကြည့်စမ်း ..ညည်းအိမ်မှာ တယ်လီဖုန်း တပ်ထားပြီဆိုတာ ငါ မသိလိုက်ပါလား.."
« Reply #225 on: June 08, 2011, 03:17:46 PM »
" အောက် ဆီ ဂျင် ပိုက် "
အထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ဖြစ်သည် ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးကြီးမှာ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေသည် ။
အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြင့် အသက်ကို အနိုင်နိုင် ရှူနေရသည် ။ သူဌေးကြီး ၏ ဘေးတွင် ၄င်း၏ အ
ရိုက်အရာကို ဆက်ခံမည့် သား ဖြစ်သူသည် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေသည့် အမူအရာဖြင့် ထိုင်နေသည် ။
မျက်လုံးအိမ်တွင် မျက်ရည်များနှင့် ပြည့်နေသည် ။ သူဌေးကြီးက အသံတိုးတိုးဖြင့် ပြောသည် ။
" ဒီလောက်တောင် ပူဆွေးသောက ဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့..မင်းသိအောင် ငါပြောမယ်..၊ ငါပိုင် ပိုက်ဆံအား
လုံး ၊ ဇိမ်ခံကား အားလုံး ၊ ငါ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ပျံနဲ့တိုက်ကြီးနှစ်လုံးကို မင်းအတွက် ငါ ထားခဲ့မယ်."
" အဖေ့ရဲ့ကျေးဇူး ကြီးမားလှပါတယ်..ကျနော့်အပေါ် ဒီလို စေတနာ ထားတဲ့အတွက်လည်း ဘယ်တော့မှ
မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..၊ ဒါနဲ့အဖေ့အတွက် ကျနော် တစ်ခုခု လုပ်ပေးနိုင်တာ ရှိလားဟင်.."
သူဌေးကြီး အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှူလိုက်ပြီး ပြောသည် ။
" အေး..ရှိတယ်...၊ မင်းရဲ့ ခြေထောက်ကို အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ပေါ်က ဖယ်လိုက်စမ်းပါ..."
« Reply #226 on: June 08, 2011, 03:43:06 PM »
" ခွင့် လွှတ် ပါ "
၁၇ ရာစု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ..။
ပထမဦးဆုံး အပျံစား ကုတ်အင်္ကျီ..၊ အပျံစား ဘောင်းဘီ ၀တ်ထားသော လူချောတစ်ယောက် ထွက်လာပြီး
ပစ်သည် ။ မြားသည် ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းထိပ်တွင် တင်ထားသော ပန်းသီးကို မှန်သည် ။ ပရိတ်သတ်
များ တခဲနက် သြဘာပေးကြသည် ။ လူချောက ပြောသည် ။
" I am Robin Hood "
ပရိတ်သတ်၏ အော်ဟစ်သံများ ဆူညံသွားသည် ။ နောက်လူငယ် တစ်ယောက် ထွက်လာသည် ။ သားရေဂျာ
ကင် ၊ သားရေဘောင်းဘီရှည်ကို ၀တ်ထားသည် ။ ၄င်းက ပန်းသီးကို ချိန်ပြီး မြားကိုလွှတ်သည် ။ ပန်းသီး ထက်
ဖြမ်း ကွဲသွားသည် ။ ပရိတ်သတ်များ သောင်းသောင်းဖြဖြ အားပေးကြသည် ။ လူငယ်က ပြောသည် ။
" I am Willghelm Telle "
ပရိတ်သတ်၏ လက်ခုပ်သံများ အရပ်လေးမျက်နှာသို့ပျံ့ နှံ့ သွားသည် ။
ဗလ ကောင်းကောင်း အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက် ထွက်လာသည် ။ တင်းကျပ်နေသော ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ဘောာင်း
ဘီတိုကို ၀တ်ထားသည် ။ ကြီးမားလှသော လေးကိုယူပြီး ချွန်ထက်နေသည့် စို့ ချောင်းဖြင့် ပစ်သည် ။ စို့ ချောင်း
သည် ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ဖောက်ထွက်သွားသည်။ ပရိတ်သတ်အားလုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား
သွားကြသည် ။ အတန်ကြာ ဘာသံမှ မကြားရဘဲ တိတ်ဆိတ်နေသည် ။ ကိုဗလကြီးက ပြောသည် ။
« Reply #227 on: June 09, 2011, 10:49:46 AM »
" မိ တဲ့ သား ကောင် "
ကိုချူချာထံ တစ်ဖက်ရွာမှ မိတ်ဆွေများ ရောက်လာသည် ။ ကိုချူချာ ၏ အိမ်တွင် ပါးစပ်ကြီး ဟပြဲနေသော
၀က်ဝံဖြူ၏ သားရေ ခင်းထားသည်ကို တွေ့ ရာ မိတ်ဆွေများက ၀ိုင်းမေးကြသည် ။
" ဒီကောင့်ကို ခင်ဗျား ဘယ်နှစ်ခါ ပစ်လိုက်ရသလဲ.."
" ဘယ်နှစ်ခါ မှန်သလဲ "
" တစ်ခါမှ မမှန်ဘူး.."
" အဲ့ဒါဆို ဒီကောင် ဘယ်လိုလုပ် သေသွားတာလဲ.."
" အရယ်လွန်သွားလို့"
" စ ကား ကောင်း နေ မိ လို့"
ကျောင်းဆရာ ကိုထိန်ဝင်း အိမ်နီးချင်း ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသည် ။ နှစ်ယောက်သား ဟိုအကြောင်း
ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည် ။ ၀ီစကီ ၀မ်းပက်စီ သောက်လိုက်ကြသည် ။ ယခင်ကထက် စကားပြော
လို့ပိုကောင်းလာသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် ကိုထိန်ဝင်း နေရာကထပြီး ပြန်ဖို့ပြင်သည် ။ မိတ်ဆွေ ဆရာ
၀န်က ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား ဇနီးကို နှုတ်ဆက်ကြောင်း ပြောပါဗျာ...၊ ဒါနဲ့သူ နေကောင်းရဲ့ လားဗျ.."
" ကျနော်လာတာ တကယ်တော့ သူ့ ကိစ္စ ခင်ဗျ....။ သူ လှေခါးက လိမ့်ကျပြီး အခု အိမ်အောက်မှာ သတိ်
« Reply #228 on: June 09, 2011, 11:02:58 AM »
" လူ သတ် လက် နက် "
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လက်နက်အရောင်းဆိုင်သို့ဝင်လာပြီး ပြောသည် ။
" ကျမကို ပစ္စတို တစ်လက် ပေးပါ.."
" ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ လား ခင်ဗျာ.."
" ကျမကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ရှေ့ နေငှားမှာပေါ့ ရှင့်.."
" အဲ့ဒါဆို ခြောက်လုံးပြူး ယူပါလား.."
" ဘာလဲ....ကျမမှာ ယောင်္ကျား ခြောက်ယောက် ရှိတယ်ထင်လို့ လား.."
" ရင် ခွဲ ခြင်း ၏ ရ လဒ် "
တာဝန်ကျ ဆရာဝန်၏ မှတ်ချက်..။
လူနာ သေဆုံးရခြင်းသည် ရင်ခွဲ စစ်ဆေး၍ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ထွက်လာသည် ။
« Reply #229 on: June 09, 2011, 12:24:58 PM »
" ကြွက် ပြေး ဂါ ထာ "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နယ်သို့ခရီးထွက်သွားသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မိန်းမဖြစ်သူ လင်ငယ်ကို အိမ်သို့ 
ခေါ်လာသည် ။ ထိုအချိန်တွင်ပင် မမျှော်လင့်ဘဲ ယောင်္ကျားပြန်ရောက်လာပြီး အိမ်တံခါးကို ခေါက်သည် ။
မိန်းမက လင်ငယ်ကို ပြောသည် ။
" ကျမ တံခါးသွားဖွင့်မယ်..။ တံခါးနောက်မှာ ရှင် ပုန်းနေ..၊ ယောင်္ကျား အခန်းထဲ ၀င်လာတာနဲ့တိတ်တိတ်
လေး အိမ်က ထွက်ပေတော့..၊ တခြားနည်းလမ်း မရှိဘူး.."
ယောင်္ကျား အခန်းထဲ ၀င်လာသည် ။ တံခါးကို အချိန်တော်တော်ကြာအောင် မဖွင့်ရကောင်းလား ဟု မိန်းမ
ကို ကြိမ်းသည် ။ မိန်းမက ဆင်ခြေပေးသည် ။
" ရှင် တံခါးခေါက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျမ ကြွက်ပြေးဂါထာ ရွတ်နေလို့ ပါရှင့်.."
ယောင်္ကျားဖြစ်သူက စိတ်ဝင်စားသွားပြီး မေးသည် ။
" ကြွက်ပြေးဂါထာ ဟုတ်လား..ဘယ်လို အသုံးချရသလဲ..."
" အိတ်တစ်လုံးကို ယူ..၊ ခေါင်းကို အဲ့ဒီ့အိတ်ထဲ စွပ်လိုက်..၊ အဲ့ဒီနောက် ဂါထာကို ရွတ်..၊ ချက်ချင်းဆိုသလို
ရှိသမျှ ကြွက်တွေ အားလုံး ထွက်ပြေးကြမယ်တဲ့..."
" ဟုတ်လား..အဲ့ဒါဆို ငါ့ကိုလည်း သင်ပေးဦး.."
အိတ်တစ်လုံးကို ယူပြီး ယောင်္ကျား၏ ခေါင်းကို မိန်းမက စွပ်ပေးလိုက်သည် ။ ထို့ နောက် ပေါက်တတ်ကရ
စကားတစ်ချို့ ကို နှုတ်မှ ပြောပြီး ယောင်္ကျားကို လိုက်ဆိုခိုင်းသည် ။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ လိုက်ဆိုနေချိန်တွင်
မိန်းမက လင်ငယ်ဘက်လှည့်ပြီး " ဘာဖြစ်လို့မထွက်သေးတာလဲ..မြန်မြန်သွား " ဟု လက်ဟန်ခြေဟန်
ဖြင့် ပြသည် ။ လင်ငယ်က မမျှော်လင့်ဘဲ ပြန်ပြောသည် ။
" ငါ့အိမ်မှာ ကြွက်တွေ အရမ်း သောင်းကျန်းနေကြတယ်.....ငါလည်း ဒီ ဂါထာကို တတ်ချင်တယ်ကွ.."